Ma Rumaysan Kartid Qiimihii Ay Barcelona Ku Diiday Saxeexa Dusan Vlahovic Oo Maanta Yurub Oo Dhan Laga Doonayo - GOOL24.NET
Ma Rumaysan Kartid Qiimihii Ay Barcelona Ku Diiday Saxeexa Dusan Vlahovic Oo Maanta Yurub Oo Dhan Laga Doonayo
Iyadoo ay Barcelona suuqa bishan January raadinayso saxeexa weeraryahan dhexe, mid kamida xiddigaha lala xidhiidhinayo ayaa ah mashiinka goolasha kooxda Fiorentina ee Dusan Vlahovic.
Dhaliyaha Serbian-ka ah ayaa ilaa haatan xilli ciyaareed cajiib ah ku raaxaysanaya isaga oo muujinaya qaab ciyaareedkii xilli ciyaareedkii hore uu wacdaraha kusoo dhigay, goolashiisa ayaa sababay inay raadiyaan in badan oo kamida kooxaha ugu fiican Yurub.
Marka laga yimaado in Fiorentina ay rajaynayso inay iibiso haddana ma doonayo inay ku iibiso qiimo ka hooseeya 70 ilaa 80 Milyan oo euro taas oo saxeexiisa ku adkaynaysa Barcelona.
Iyadoo ay haatan xaaladu sidaas tahay ayaysan jamaahiirta Barcelona ku farxi doonin ogaanshaha qaabkii ay kooxoodu ku diiday saxeexiisa iyadoo sanadkii 2020 loosoo bandhigay inay amaah ku qaadato kaddibna 18 Milyan oo euro rasmi ugula wareegto sanadkii hore ee 2021.
Taxahana ayaa bilaabmay markii Eric Abidal uu la kulmay wakiilkiisa Darko Ristic, wakiilka ayaa wakhtigaas u sheegay inay Barcelona amaah kula saxeexato Vlahovic kaddibna ay 18 Milyan oo euro kula wareegto sanad kaddib.
Vlahovic ayaa ahaa mid si cajiib ah u ciyaarayay kahor go’doonkii Korona Fayras laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaa hoos u dhacay dhammaadkii xilli ciyaareedkii 2019-20, taas ayaa sababtay inuu shaki galo Barcelona waxaana ay go’aansadeen inay iskaga hadhaan saxeexiisa.
Tan iyo markii ay gaadheen go’aankaasi ah inaysan la wareegin, Vlahovic ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kusoo muujiyay Fiorentina isaga o 37 gool uga soo dhaliyay horyaalka waxaana uu u muuqdaa weeraryahanka dhammayska tiran ee ay Blaugrana raadinayso.